Ulaagaalee Laa İlaah İll-Allah-Kutaa 2 - Ibsaa Jireenyaa
Sharxii 3ffaa-Al-Qabuul (Fudhachuu)
Namni Laa ilaah illallah sirritti beekee fi yaqiina (mirkaneefannaa) erga qabaate booda qalbii fi arrabaan wanta Laa ilaah illallah agarsiistu hunda fudhachuu qaba. Wanti Laa ilaah illallah agarsiistu Rabbiin qofa gabbaruu fi wanta Isaan ala jiran gabbaruu dhiisudha. Namni Laa ilaah illallah dhugaa ta’uu osoo beekeyyuu jecha tana yoo fudhachuu dide, inni kaafira. Fudhachuu diduun kuni of tuuluu, waanyu fi sababoota adda addaa irraa kan madduudha. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha:
Kuni warra Rabbii gaditti waan biraa gabbaran gara fuunduraatti Jahaannamiin seenan ilaalchise dubbata. Yommuu “Rabbii tokkicha malee dhugaan gabbaramaan hin jiru. Kanaafu Isa qofa gabbaraa.” jedhaman, ajaja kana hin fudhatan. Kana irra, of tuulanii fudhachu didu.
Namni arrabaan Laa ilaah illallah jedhe wanta Laa ilaah illallah’n agarsiistu yoo hin fudhatin, jechi tuni homaa isa hin fayyaddu. Akka fakkeenyaatti, warra Laa ilaah illallah jedhanii qabrii gabbaran ilaalu dandeenya. Namoonni kunniin Laa ilaah illallah haa jedhanii malee qabrii gabbaruu hin dhiisan. Qabrii bira deemanii nama du’e kadhatu. Kanaafu, isaan hiika Laa ilaah illallah hin fudhannee jechuudha.
Sharxii 4ffaa: Masakamuu (Al-Inqiyaad)
Kuni wanta Laa ilaah illallah’n agarsiistu hojii irra oolchu fi itti buluudha. Masakamuu jechuun wanta ajajaman hojjachuu fi wanta irraa dhoowwaman dhiisudha. Namni yommuu farda masaku, fardi gara masakameetti deema. Nama isa masake didee gara biraa hin deemu. Kanaafu, fardii kuni masakamaadha jechuudha. Haaluma kanaan namni Laa ilaah illallah jedhee ragaa bahuus ajajoota Gooftaa isaatiif kan masakamu ta’uu qaba. Kuni hiika Islaamaati. Islaama jechuun “fedhii fi ajaja Rabbiitiif masakamuu fi Isa qofaaf gadi jechuudha.” Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha:
“Adabbiin isinitti dhufuun dura gara Gooftaa keessanii deebi’aa, Isaaf harka kennaa (ajajamaa, masakamaa).” Suuratu Az-Zumar 39:54
Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa nama ajaja Isaatiif bulu akkana jechuun faarse:
“Nama kafare, kufriin isaa si hin gaddisiisin. Deebiin isaanii garuma Keenya, ergasii wanta hojjata turan isaanitti himna. Dhugumatti, Rabbiin Beekaa wanta qoma keessa jiruuti. Yeroo xiqqoof isaan qananiisna ergasii gara azaaba (adabbii) cimaatti isaan dirqisiifna.” Suuratu Luqmaan 31:23-24
Nama Rabbitti amanuu dide, kufriin (amanuu diduun) isaa si hin gaddisiisin. Sababni isaas, Guyyaa Qiyaamaa deebiin isaanii garuma Keenya ta’a. Hojii fokkuu isaan addunyaa keessatti hojjataa turan isaanitti beeksifna. Ergasii jazaa isaanii isaaniif kafalla. Dhugumatti Rabbiin wanta qoma keessa jiru hunda beeka. Kan akka niyyaa, yaada gaarii fi badaa, kufrii namoonni qoma keessatti dhoksan hunda beeka.
Sharxii 5ffaa–As-Sidq (Dhugaa ta’uu)
Kana jechuun namni “Laa ilaah illallah” jedhee ragaa bahu, qalbiin isaa tan dhugoomsite ta’ee jechuu qaba. “Laa ilaah illallah” itti qalbiin osoo hin amaniin arraba qofaan yoo jedhe, inni munaafiqa kijibaa ta’a. “As-Sidq (dhugaa ta’uun)” faallaa “kijibaati”.
Namoonni baay’een namoota Laa ilaah illallah” jedhanii ragaa bahan dhagahanii jiru. Garuu namoonni kunniin dhugaadhaan jecha tana hin jedhan. Jecha tanatti hin amanan. Of eeguuf ykn faayda xiqqoo argachuuf qofa Laa ilaah illallah” jedhu. Isaan kuni munaafiqoota. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa akkana jechuun Qur’aana keessatti isaan ibse:
“Namoota keessaa nama, “Rabbii fi Guyyaa Aakhiraatti amanne.” jedhutu jira, garuu isaan warra amananii miti. Rabbii fi warra amanan gowwoomsuuf [carraaqu], hin beekanii malee isaan lubbuu ofii malee homaa hin gowwoomsan. Qalbii isaanii keessa dhukkubatu jira. Rabbiinis dhukkuba isaaniif dabale. Sababa kijibaa turaniif adabbii laalessaatu isaaniif jira.” Suuratu Al-Baqara 2:8-10
Namoota keessaa garee dhama’anii warra dhugaan amananii fi kaafirtoota jidduu deddeebi’antu jira. Isaan kuni munaafiqota arraba isaanitiin Rabbii fi Guyyaa Aakhirah (Qiyaamaa) dhugoomsine jedhaniidha. Garuu keessaan kijibdoota, qalbiidhaan hin amanne. Wallaalummaa isaanii irraa kan ka’e iimaana mul’isuu fi kufrii dhoksuun Rabbii fi warra amanan gowwoomsine jedhanii amanu. Garuu isaan mataa ofii malee eenyullee hin gowwoomsan. Sababni isaas, xumurri gowwoomsu isaan irratti deebi’a. Wallaalummaan isaanii daangaa darbuu irraa kan ka’e of gowwoomsaa akka jiran isaanitti hin dhagahamu. Qalbiin isaanii waan baddeef kuni isaanitti hin dhagahamu. Qalbii isaanii keessa dhukkuba shakkii fi fasaada (badiitu) jira. Ma’asiyaa (cubbuu) adabbiitti isaan geessuun qoramanii jiru. Rabbiin qalbii isaanii keessatti shakkii isaaniif dabale. Ammas sababa kijibaa fi nifaaqa isaanitiif adabbii laaleessaa nama rakkisuu fi dhukkubsutu isaaniif jira.
Islaamatti amananii osoo hin ta’in Muslimoota ta’uun faayda argachuuf qofa namoonni Laa ilaah illallah jedhanii ragaa bahan, shahaadan (ragaa bahuun) isaanii kuni Rabbiin biratti fudhatama hin qabu. Aakhiratti mindaa wayitu hin argatan. Sababa kijibaniif adabbii laalessaa qunnamu.
Namni dhugaan qalbii isaatiin laa ilaah illallah tti amanuun laa ilaah illallah jedhe ibidda irraa baraarama. Ergamaan Rabbii (SAW) akkana jedhan:
مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ‏‏‏
“Eenyullee ‘Rabbiin malee haqaan gabbaramaan hin jiru, Muhammad Ergamaa Isaati’ jedhee dhugaadhaan qalbii isaa irraa ragaa bahu hin jiru Rabbiin ibidda irraa kan isa baraaru yoo ta’e malee.” Sahiih Al-Bukhaari-128
Kana jechuun namni kamiyyuu dhugaadhaan qalbii isaatiin itti amanuun “Rabbiin malee haqaan gabbaramaan hin jiru, Muhammad Ergamaa Isaati” jedhee ragaa bahe, Rabbiin ibidda irraa isa eega.
 Tafsiiru muyassar-fuula 3
Aqiidatu Tawhiid-fuula 49, Sheykh Saalih ibn Fawzaan
Commentary on the Forty Hadith of An-Nawawi-Vol.1, fuula -285-286